Arsenal Oo Go'ankii Ugu Danbeeyay Ka Qaadatay Heshiiska Cusub Ee Alexandre Lacazette
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo go’ankii ugu danbeeyay ka qaadatay Heshiiska Cusub ee Alexandre Lacazette
Arsenal oo go’ankii ugu danbeeyay ka qaadatay Heshiiska Cusub ee Alexandre Lacazette
November 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay go’aansatay inaysan u soo bandhigin Alexandre Lacazette heshiis cusub oo uu ku sii joogo Emirates.
30-sano jirkaan ayaa ku riyaaqaya qaab ciyaareed joogto ah oo uu ku soo bilaabay waqtiga Mikel Arteta , laakiin mustaqbalkiisa ayaa hawada ku jira maadaama uu sii dhamaanayo bilihii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa Gunners.
Lacazette ayaa heshiis cusub laakiin kooxda kasoo horjeeda heshiis cusub oo waqti dheeri ah.
Sida laga soo xigtay El Nacional , Arsenal ayaa ugu dambeyntii go’aansatay inaysan cusbooneysiin qandaraaska Lacazette, waxaana lagu wadaa inuu bilaash ku tago dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Atletico Madrid ay tahay kooxda ugu cadcad saxiixa ciyaaryahankii hore ee Lyon 2022, inkastoo ay tahay inay iska caabiso xiisaha Barcelona si ay u hesho weeraryahanka.
Lacazette ayaa kaliya dhaliyay seddex gool 10 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan, mid ka mid ah goolashaas waxa uu ka dhaliyay Premier League.